Mbare Archives - HealthTimes
MUTSVAKURUDZO dzakaitwa nevari kuona nezve denda re COVID-19 munyika ye Zimbabwe, ve COVID-19 taskforce, zvinoratidza kuti nzvimbo dzekutengeserana ndimo muri kutapurianwa chirerwe che COVID-19 zvakanyanya mumaguta makuru e Harare ne Bulawayo. Na Michael Gwarisa Vachitaura mu tsamba kuvatapi venhau, gurukuota rinoona nezvekufambiswa kwemashoko, Minister Monica Mutsvangwa vati ivo vanhu vakawanda havazi ketevedza zvakatemwa ne bazi re World Health Organisation (WHO) kuti vadzivirire chirwere che COVID-19 munyika. “Pane tsvakurudzo irikuitwa yekutarisa nzvimbo dziri kutsviriridza ne COVID-19 munyika yese. Nzvimbo dziri kutariswa dzinosangasnisira misika yemiriwo muguta re Harare ne Bulawayo. Zvakaonekwa kuti…
#COVID19, BREAKING NEWS, HealthTimes VernacularCOVID-19, MbareLeave a comment